Nagu saabsan - Muraayadaha JUMP
JUMP waa shirkad kooxeed leh khibrad 20 sano ah oo ku takhasustay soo-saarista maalinlaha ah noocyo kala duwan oo dhexdhexaad ah iyo heer sare ah oo lagu isticmaalo muraayadaha dhalada iyo dhalada quraaradaha Waxay ku taal gobolka dalxiiska xeebta - ShanDong, oo ah madaxa bari ee Buundada New Eurasian Continental Bridge，waxay leeyihiin dekedda caalamiga ah ee ugu weyn Shiinaha- QingDao Port, JUMP waxay leedahay goob juquraafi ah oo u gaar ah, taas oo u abuurtay xaalado dabiici ah oo wanaagsan ganacsiga caalamiga ah.
Wuxuu daboolayaa aag 50000 ㎡ wuxuu tiriyaa in kabadan 500 oo shaqaale ah, waxaa jira in kabadan 26 khadadka wax soosaarka aqoon isweydaarsiga, soosaarka awooda waa 800 milyan oo kumbuyuutar sanadkiiba. Waxaa jira lix mashiin baaris otomaatig ah oo leh kamarad iyo 2 khadad baako oo otomaatig ah oo aan kaliya hubin tayada sidoo kale cusbooneysiiya hagaajinta wax soo saarka. Hayso dubista, daabacaadda, dhaxan barafoobay, xardho, xardho, electroplating iyo midab xereen iwm qadka wax soo saarka qoto dheer, waxay bixin kartaa hal alaab oo muraayad joojin ah, sidoo kale waxay siin kartaa dhalada dhalada ˴ calaamadee dhalada dhalada wada jir ah sida macaamiisha looga baahan yahay. Dhalada ruuxiisa bottle dhalada khamriga bottle dhalada biirka jar dhalada galaaska ˴ dhalada sharaabka bottle dhalada cuntada ˴ kaladuwanaanta sare iyo kuwa dhexe ee dhalooyinka khamriga ah oo qaas ah, maadada buluuga ah material wax madmadow leh weelka jarjarka ˴ dhalada cabitaanada fudud ˴ mishiinka wax lagu shubo jar weel dhalo ah oo kala duwan ayaa ah badeecadayada caanka ah. Sidoo kale soo saar muraayadaha dhalada sare ee borosilicate-ka ah kuwaas oo sifiican ula jaan qaadi kara microwave-ka iyo mashiinka dharka lagu dhaqo, wuxuu leeyahay heerkul u adkeysanaya kuleylka oo ka sareeya 250 ℃. Dhammaan alaabooyinka ayaa ka gudbi kara imtixaanka FDA, LFGB iyo DGCCRF, dhirteennu waxay leeyihiin shahaadooyin taxane ah oo ISO ah. Nidaamka wax soosaarka adag wuxuu bixiyaa hubin tayo leh.
Hayso shirkad soo dejin iyo dhoofinta iskeed u shaqeysa oo leh taageero farsamo oo horumarsan oo leh dhalooyinka quraaradaha iyo dhalooyinka quraaradaha loo dhoofiyo Yurub ˴ Mareykanka America Koonfurta Ameerika ˴ Koonfur Afrika ˴ Koonfur-bari Aasiya ˴ Ruushka ˴ Bartamaha Aasiya iyo Suuqa Bariga Dhexe, halkaas oo ay ku wanaagsan tahay sumcad. Waxaa jira laamo ku yaal Myanmar ˴ Filibiin ˴ Vietnamese ˴ Thailand ˴ Ruushka ˴ Uzbekistan. In ka badan 20 sano oo khibrad warshadeed ah oo u adeegida macaamiisha gudaha iyo dibaddaba, JUMP waxay ku soo korodhay shirkad xirfadlayaal ah oo bixisa alaabada baakadaha dhalada ah iyo nidaamyada adeegga. Cagaar, jawi bey'adeed saaxiibtinimo leh iyo nolol caafimaad qab ah oo bina aadamku had iyo jeer wuxuu ahaa jihada istiraatiijiyadeena horumarineed. U bood marwalba cusbooneysii tiknoolajiyada iyo hal-abuurnimada raac heerka ugu cusub ee caalamiga ah, kooxda naqshadeynta xirfadleyda ah ayaa bixin karay adeeg shaqsi ah sida shuruudo kala duwan oo daabacaadda ah, xirxirida design naqshadeynta alaabta ah, iwm. xalka iyo gaaritaanka iskaashi guul-guul ah.
Dhalo Saliid saytuun ah, Dhalada Saliida Saliidda ah ee 250ml, Saliida Zeytuunka Iyo Khamriga Qamriga, Dhalo Saliid Cagaaran, Dhalo Saliid saytuun ah, Jar Kaydinta Saliida Olive,